Roberto Di Matteo oo amaanay sida ay kooxdiisu u ciyaartay kulankii Nordsjaelland. - Caasimada Online
Home Warar Roberto Di Matteo oo amaanay sida ay kooxdiisu u ciyaartay kulankii Nordsjaelland.
Roberto Di Matteo oo amaanay sida ay kooxdiisu u ciyaartay kulankii Nordsjaelland.
Tababaraha kooxda Chelsea Roberto Di Matteo ayaa amaanay ciyaartoyda kooxdiisa ka dib markii ay goolal aan look ala harin ku shubeen shabaqa FC Nordsjaelland, afar gool oo ay kala dhaliyeen Juan Mata labo David Luiz iyo Ramires ayey kooxda ka dhisan galbeedka London ku dhadhamisay guusheedii koowaad ee ECL.
Mata ayaa aad uga dhex muuqaday ciyaarta iyadoo kabtankii Chelsea Lampard uu ahaa xubin ka muuqata Garoonka halka Torres uu caawiye ka ahaa goolasha intooda badan.
Markii wax laga weydiiyey hadii Uu Luiz u tuuray Laadka xorta ah sida Cristiano Ronaldo RDM ayaa ku jawaabay: “Waa wax aniga igu saabsan ! Waxaan ku qaadanaa Tababarka, waxay intooda badan dhaliyaan gool isoo jiita. Mata inta badan wuxuu ku dhaliyaa Tababarka, Luiz isna waa la mid xaga Laadadka xorta ah.”